Gbasara Anyị - Shanghai Teamstand Corporation
Iji ghọọ Top 10 ọgwụ soplaya na China
Maka ahụike gị.
Hailọ ọrụ Shanghai Teamstand Corporation bụ ọkachamara na-eweta ngwaahịa ọgwụ na ngwọta. "Maka ahụike gị", nke gbanyere mkpọrọgwụ n'ime obi onye ọ bụla nke otu anyị, anyị na-elekwasị anya na ndị na-ahụ maka ahụike na akụrụngwa, ihe nrụzigharị na akụrụngwa, ngwaahịa laabu, wdg.
Ngwaahịa anyị gụnyere sirinji (sirinji mkpofu, sirinji akpaaka, sirinji na-ewepụ aka, sirinji nchekwa), ngwa ngwa ngwa ngwa antigen, ihe nnwale mgbochi, ngwa nchịkọta ngwa ngwa, nchịkọta nchịkọta mmiri, eriri ọbara nchịkọta tube, cvc, akpa mmamịrị , Ngwa ndị a na-ewepụghị ekpuchi na-agụnye mkpuchi ihu, mkpuchi mkpuchi, uwe mwụda, uwe dị iche iche, uwe ime, uwe ndị ọbịa, uwe ime ụlọ, mkpuchi, mkpuchi aka, mkpuchi akpụkpọ ụkwụ, akwa akwa, ihe ndina, mkpuchi ohiri isi, apron na na. nke na-ọtụtụ-eji n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ clinic.All anyị ọgwụ na ngwaahịa na ọgwụ na ahụ ike ngwá & akụrụngwa a gafere ISO13485, na anyị nwetara asambodo nke ISO na OA audited site "TUV" Germany, ọbụna ọtụtụ n'ime anyị na ngwaahịa ndị nke FDA mma. Anyị na-enye OEM dị ka ndị ahịa ′ samples.
N'ime afọ 10 'ahụmịhe na ụlọ ọrụ ahụike, anyị ebupụla USA, EU, Middle East, Southeast Asia wdg karịa mba 120. Anyị enwetakwala aha ọma n'etiti ndị ahịa a niile maka ezigbo ọrụ na ọnụ ahịa asọmpi.
Isi na Shanghai, nnukwu na modernized obodo na China, TEAMSTAND invests 2 ụlọ mmepụta ihe na Shandong na Jiangsu, ma na-akwado ihe karịrị 100 ụlọ mmepụta ihe na China. "Top 10 ọgwụ soplaya na China" bụ ihe mgbaru ọsọ anyị, Ọ na-kweere na, na ọkachamara na-arụ ọrụ, ezi njikwa, elu na ngwá na nlezianya àgwà akara usoro, anyị nwere ike ime ka mma na mma n'ọdịnihu.
Nabata ndị enyi niile na ndị ahịa n'ụwa niile na ụlọ ọrụ ahụike ịkpọtụrụ anyị!
Ogo bụ ihe kachasị mkpa maka ngwaahịa ọgwụ. Iji hụ na naanị ndị kasị mma ngwaahịa, anyị na-arụ ọrụ na kasị ruru eru ụlọ mmepụta ihe. Imirikiti ngwaahịa anyị nwere CE, FDA asambodo, anyị na-ekwe nkwa afọ ojuju gị na ngwaahịa anyị niile.
Anyị na-enye nkwado zuru oke site na mbido. Ọbụghị naanị na anyị na-enye ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche maka mkpa dị iche iche, mana ndị otu ọkachamara anyị nwere ike inye aka na ngwọta ahụike ahaziri iche. Isi okwu anyị bụ inye ndị ahịa afọ ojuju.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ iji nweta ogologo oge imekọ ihe ọnụ. Emezuru nke a ọ bụghị naanị site na ngwaahịa dị mma, kamakwa ịgbalị ịnye ọnụahịa kacha mma maka ndị ahịa anyị.
Anyị dị njikere inyere gị aka n'ihe ọ bụla ị na-achọ. Oge nzaghachi anyị dị ngwa, ya mere nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị taa na ajụjụ ọ bụla. Anyị na-atụ anya ijere gị ozi.
Anyị nwere ndị ọrụ injinia ọkachamara maka ijiri mkpa niile akọwapụtara.
Ya mere, na ị pụrụ izute gị ọchịchọ, biko n'ezie na-eche na-eri-free ịkpọtụrụ anyị. Nwere ike izipu anyị ozi ịntanetị ma kpọọ anyị ogologo.